Were Macva sistemụ kọmputa gị dị njikere ugbu a na ọnụahịa a na-apụghị ịgbagha agbagha | Esi m mac
Ọ bụghị mmadụ niile na ọ bụghị ha niile hụrụ kọmputa Mac anyị n'anya.Ọ bụrụgodi na anyị ahọrọla nhazi nke kachasị, ọ bụrụgodi na kọmpụta ahụ enweela ọgụ na afọ ole na ole, arụmọrụ ya dị egwu. O sina dị, Macs chọkwara nlekọta dị ntakịrị iji hụ na arụmọrụ kacha mma.
Ihe nhicha sistem de Movavi bụ ihe bara uru nke ga - enyere anyị aka n’ụzọ ọsọsọ, dị mfe ma dịkwa irè na ọrụ nke ebuli anyị Mac akụrụngwa na-agba ọsọ dị ka ngwa ngwa na ngwa ngwa dị ka ụbọchị mbụ. Ma ugbu a, na mgbakwunye, a na-ere ya maka obere oge yana mbelata ego 93, yabụ ọ bụ ohere zuru oke iji nweta ya.
1 Sistemụ Cleaner Movavi na-ehicha ma na-agba ọsọ ọsọ nke Mac gị
1.1 Ọrụ ndị isi
Sistemụ Cleaner Movavi na-ehicha ma na-agba ọsọ ọsọ nke Mac gị
Ndị anyị bụ ndị na-eji kọmputa ọ bụla na ezinụlọ Apple Mac maka afọ ole na ole ugbu a maara na, ọ bụ ezie na arụmọrụ ya dị oke mma, na ojiji niile kọmputa na-agbakọta usoro nke faịlụ ndị na-enweghị isi na draịvụ ike nke na-emecha mee ka ọ na-agba ọsọ nwayọọ karịa ka o kwesịrị.
Iji wepu faịlụ ndị a niile site na nchọgharị weebụ n'onwe ya, site na ngwa ndị ọzọ nke ngwa anyị ewepụrụ ma ọ bụ emelitere, faịlụ abụọ, wdg, enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu na ọtụtụ ngwa, ma na Mac App Store na n'èzí ya. N'ezie, anyị agwala gị na ihe karịrị otu oge banyere ụfọdụ n'ime ha na Soy de Mac, taa ọ bụ oge nke Cleaner System, njikarịcha ngwá ọrụ maka Mac mepụtara Movavi.
System Cleaner Movavi bụ ngwa dị irè ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ maka sistemụ OS X nke ga - enyere gị aka ihicha ma mee ngwa ngwa MacBook, iMac ma ọ bụ ngwa Apple ndị ọzọ. Otu n'ime isi ihe mere maka Mac iji jiri nwayọ na-agba ọsọ bụ nchịkọta nwayọọ nke faịlụ na-enweghị isi na draịvụ ike na-ekpuchi sistemụ arụmọrụ. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ anaghị amata na faịlụ ndị a adịghị mma, mana sistemụ nhicha Movavi nwere ike ịchọta ha wee kpochapụ ha kpamkpam, na-ahapụ ohere na draịvụ ike gị ma melite arụmọrụ kọmputa gị niile. Ọzọkwa, ihe omume ahụ bụ n'ezie mfe iji ekele ya mfe na kachasị interface.
Irè, Ọtụtụ mgbe anyị amaghị maka ịdị adị nke faịlụ ndị ahụ na - enweghị isi na - eme ka Mac kwụsịlata. Ihe kpatara ya dị mfe: N’adịghị ka ngwa, vidiyo anyị ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ọzọ, ndị ahụ ha nọ ebe ahụmana apughi ihu anya belughi ma oburu na achoputara ya nke oma.
N'ụzọ dị mma, ngwá ọrụ dịka Movavi sistemụ sistemụ ekwe ka anyị na-ebuli arụmọrụ nke anyị iMac, MacBook, Mac Mini-enweghị mkpa maka elu oru ihe ọmụma, dị ka ọ nwere obi ụtọ na kensinammuo interface na, na dị nnọọ a di na nwunye nke clicks, malite «a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ hazie gị Mac ma nye ya nnukwu mmụba arụmọrụ. '
Ngwa ngwa ma hichapụ cache na ndekọ faịlụ ndị na-emebi ohere na draịvụ ike gị.
Ihe mkpofu ahịhịa.Regain free disk ohere site na ihichapụ faịlụ na ahịhịa.
Njin ọchụchọ mbiputara. Jiri oyiri nyocha ahụ iji chọta ebe ma hichapụ ụdị nsụgharị nke faịlụ ndị na-ewe ohere na kọmputa gị.
Nyocha nnukwu faịlụ. Kọwaa gigabytes nke ohere n'otu oge site na ihichapụ faịlụ echefuru echefu, buru oke ibu.
Jiri Uninstaller iwepu kpamkpam ihe eji arụ ọrụ na nke Mac OS X (Mail, Safari, Chess, wdg). Hichaa faịlụ ọ bụla fọdụrụ na mmemme ndị ewepụrụ na mbụ.
Nhicha nke ncheta.
Shredder ga-enyere gị aka hichapụ data nzuzo na-adịgide adịgide iji kpuchido nzuzo gị.
Ngwa ojiji diski. Nyochaa kọmputa gị ma chọpụta ebe nchekwa na-ewere ohere kachasị na draịvụ ike gị.
Ọrụ nke asụsụ ndị a na-anaghị eji. Bibie asụsụ ndị etinyegoro na ịchọghị.
Movavi sistemụ sistemụ Ọ nwere ọnụahịa oge niile nke .12,99 10, mana ugbu a na ruo echi, February 93, ị nwere ike nweta ya na 0,99% ego maka naanị € XNUMX. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwalite Mac gị, oge a bụ oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Were Macva sistemụ nhicha sistemụ Movavi nọrọ na ya, were kwụrụ ụgwọ a na - apụghị ịgbagha agbagha
Zọ kachasị mma iji mara ihe emoji sitere na Mac anyị